China TY230-3 Bulldozer Emeputa na Nweta | Shehwa
TY230-3 bulldozer na-akwụsịtụ akwụsị, na-enyefe hydraulic, ụdị ụgbọelu na-achịkwa hydraulic. Planetary, ike mgbanwe nnyefe nke Unilever ejikwara. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi.
TY230-3 bulldozer na-akwụsịtụ akwụsị, na-enyefe hydraulic, ụdị ụgbọelu na-achịkwa hydraulic. Planetary, ike mgbanwe nnyefe nke Unilever ejikwara. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi. Ike dị ike, arụmọrụ magburu onwe ya, arụmọrụ arụmọrụ dị elu na nlele anya na-egosi atụmatụ uru. Nhọrọ gụnyere U-agụba (Ike 8.1m), akara aka shank, ROPS na akụrụngwa ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ gị kachasị mma maka ụlọ n'okporo ụzọ, mmiri hydro-electric, mgbanwe mpaghara, ụlọ ọdụ ụgbọ mmiri, mmepe m na ihe ndị ọzọ.
● Main nkọwa
Ọrụ ọrụ (gụnyere ripper) (Kg): 24840
Nsogbu ala (gụnyere ripper) (KPa): 76
Track nlele (mm): 2000
Nkeji nkwụsị ala (mm): 405
Ike ịgba ụra (m): 7.8
Obosara (mm): 3666
Max. Igwu ala omimi (mm): 540
N'ozuzu ya (mm): 573336663380
Pịnye: CUMMINS NT855-C280S10
Gosiri mgbanwe (rpm): 2000
Ike Flywheel (KW / HP): 169/230
Max. torque (Nm / rpm): 1050/1400
Ugboro oriri oriri (g / KWh): 217
Pịnye: wingdị swing ụdị beam
Akwụsịla usoro nke nhazi ụda: 7
Number nke track rollers (n'akụkụ ọ bụla): 7
Number nke rollers ụgbọelu (n'akụkụ ọ bụla): 2
Ẹtop (mm): 216
Obosara akpụkpọ ụkwụ (mm): 560
Gear 1abụrụ 2nd 3rd
Gaanụ ihu (Km / h) 0-3.8 0-6.8 0-11.8
Azụ (Km / h) 0-4.9 0-8.5 0-14.3
Mejuputa haịdrọlik usoro
Max. nrụgide usoro (MPa): 19.1
Umpdị mgbapụta: Kwadoro mgbapụta
Mmepụta sistemụ L / min: 194
Usoro ịkwọ ụgbọala
Nzipu: Planetary, ike nnofega nnyefe na atọ gbapụrụ ọsọ n'ihu na atọ gbapụrụ ọsọ agbara, ọsọ na direction nwere ike ngwa ngwa gbanwere.
Ntughari ntughari: otutu diski metallurgy diski aputara site na oge opupu ihe ubi. haịdrọlik ejikwara.
Braking ipigide: Breeki bụ mmanụ abụọ direction sere n'elu gbalaga breeki ejikwara site n'ibu ụkwụ pedal.
Final mbanye: The ikpeazụ mbanye bụ otu Mbelata na spur gia na nke sprocket, nke na-kaa akara site duo-cone akara.
Nke gara aga: T160-3 Bulldozer
Osote: TY320-3 Bulldozer
Bulldozer Nchedo Oke ohia
Rubbish Ijikwa Bulldozer